Garaash uu lahaa hogaamiye kooxeed hore oo laga helay hub farabadan (Waa Kuma?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya ayaa shalay hub fara badan ka heshay goob aan inta badan looga shaki qabin in hubka lagu keydiyo, halkaasoo ah garaash gaadiidka lagu farsameeyo.
Howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka sameeyeen xaafado ku teedsan isgooyska Banaadir ee degmada Hodon ayaa lagu soo qabtay hub baasuukayaalka loo yaqaano, bambaanooyin, qoryo iyo rasaas kala duwan.
Hubkaan ayaa laga helay sida ay wararku sheegayaan garaashkii marxuum Cismaan Xasan Cali oo xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ka mid ahaa, horayna uga mid ahaa hogaamiyaashii dagaalka Muqdisho.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada Somalia iyo kuwa AMISOM ay gacanta ku dhigeen rag ku sugnaa garaashka; kuwaasoo tiradooda aan wali si rasmo ah loo shaacin.
Afhayeenka booliska Soomaaliya, Col. Qaasim Axmed Roobl oo warbaahinta la hadlay howlgalka kaddib ayaa sheegay in ciidamada ay ahaayeen kuwa isku-dhaf ah; isla markaana howlgalkoodu uu ahaa mid qorsheysan sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale, afhayeenku wuxuu hadalkiisa ku daray in howlgalka lagu qaatay ama lagu soo qab-qabtay hub uu si sharci darro ku haystay hoggaamiye kooxeeed caan ahaa oo geeriyooday.
Col. Qaasim Axmed ayaa ugu dambeyn shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-shabaab iyo hubka sharci-darrada ah ee lagu haysto magaalada.
Afhayeenka wasaaradda Amniga Qaranka Soomaaliya, Maxamed Yuusuf oo isaguna wabaahinta la hadlay ayaa sheegay in hubkaas ay kusoo wargeliyeen dad magaalada ku sugan, wuxuuna xusay iney dadkaas u mahad celinayaan.
Sidoo kale, waxaa goobta ka hadlay taliyaha ciidamada AMISOM, Lt. Gen. Silas Ntigurirwa kaasoo sheegay in hubka ay qabteen uu ahaa hub loo diyaariyey in lagu duulaan tago, isagoo tusaale usoo qaatay rasaas qoryaha oo aheyd mid diyaarsan oo cabeysan.
Taliyaha AMISOM ayaa sheegay iney sii wadi doonaan howlgalka hubka loogu uruurinayo xaafadaha magaalada Muqdisho si wax looga badelo amaanka caasimadda.
Hogaamiye kooxeedyadiii hore ee Muqdisho ayaa horay u sheegay iney hubkooda ku wareejiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, arrintaas oo u muuqata mid dhab aheyn.